China Titanium izahlulo mveliso kunye nabenzi | Khokela
Sinamava kakhulu kwimveliso eyenziwe yamacandelo eetanium ezenziwe ngomatshini. Sinikezela ngomgangatho ophezulu wamalungu e-titanium ayingxubevange, ayilelwe ukuhlangabezana nokujoliswa kwabathengi bethu.
Sigcina unxibelelwano olusebenzayo kunye nabathengi bethu ukuqinisekisa ukuba siziqonda ngokupheleleyo iimfuno zabathengi bethu kwaye sivelisa iindawo ezineempawu ezinqwenelekayo ngeyona ndlela ineendleko ezifanelekileyo.
Uncedo lwaMatshini weTitanium oMatshini
Amandla kunye nobunzima: Yomelele njengezona zinto ziqhelekileyo zentsimbi zingaphantsi kwama-40% kubunzima bomlingani
Ukuxhathisa umhlwa: Phantse ukumelana nokuhlaselwa ngamachiza njengeplatinam. Omnye wabagqatswa abagqwesileyo kumanzi olwandle kunye nokuphathwa kwemichiza
Isibheno seCosmetic: Umtsalane weTitanium kunye nesibheno sobuchwephesha sigqitha kwizinyithi ezixabisekileyo ngakumbi kwindawo yentengiso yabathengi
Zithini izibonelelo zetitanium, kwaye zeziphi iitanium ezithandwayo?
I-Titanium yintsimbi entsha, inezibonelelo ezininzi ezibalulekileyo kunezinye izinyithi.
1. Amandla aphezulu: Ubuninzi be-Titanium alloy density yi-4.51g / cubic centimeter, kuphela yi-60% yentsimbi, i-titanium pure density isondele kubuninzi bentsimbi yesiqhelo, ke titanium ingxubevange yamandla athile makhulu kakhulu kunezinye izinyithi.
2.Umandla obushushu aphezulu: Ubushushu obusebenzayo beTitanium bungafikelela kwi-500 ℃, ngelixa i-aluminium alloy ifanele ibe kwi-200 ℃.
3.Ukuxhathisa umhlwa: I-Titanium inokumelana ne-corrosion efanelekileyo kwi-alkali, i-asidi, ityuwa njl.
4. Ukusebenza okuhle kobushushu obuphantsi: I-Titanium isenokugcina iipropathi zayo zoomatshini kubushushu obuphantsi kunye nakubushushu obusezantsi kakhulu.
Imishini ye-titanium ineenzuzo ezininzi ngaphezulu kwezinye izinto. Amalungu omatshini weTitanium ayaziwa ngamandla abo aphezulu kunye nobunzima; Kwakhona ductile, umhlwa ukumelana netyuwa kunye namanzi, kwaye indawo yokunyibilika eliphezulu, iyenza ukhetho ogqibeleleyo kumashishini ezininzi kunye nokusetyenziswa.
Ezinye zezona alloys zaziwayo ze-titanium ziyalandela:
Gr1-4, Gr5, Gr9 njl,
Zimbini izinto eziqhelekileyo zokuphosa ii-titanium alloys: IBakala leTitanium kunye neBanga leTitanium 5. Nceda ubone apha ngezantsi ngeempawu ezineenkcukacha, usetyenziso njl.
I-titanium yeBakala 2 inqabile kakhulu kwimeko yemichiza kubandakanya i-oxidizing, i-alkaline, ii-organic acid kunye nezinto ezihlanganisiweyo, izisombululo zetyuwa yolwelo kunye neegesi ezishushu. Kumanzi olwandle, iBanga lesi-2 liyamelana nokubola kumazinga obushushu ukuya kuthi ga kuma-315 ° C, nto leyo ebangela ukuba ilungele ukusetyenziswa kweendlela ezahlukeneyo zaselwandle
I-Titanium yeBanga lesi-5 yeyona Titanium ixhaphake kakhulu kwihlabathi liphela. I-Aerospace, unyango, ulwandle kunye neekhemikhali zokulungisa kunye neenkonzo zeoyile
Sesiphi isicelo esenza ukuba iTitanium isetyenziselwe ubukhulu becala?
I-Titanium ihlala isetyenziswa kwi: inqwelomoya, imoto kunye nesithuthuthu, izixhobo zamachiza, izixhobo zonyango, izixhobo zokuhamba intaba njl.